Nin xabsiga Kobar ku jira oo madaxweynihii hore ee Suudaan ooyin ka keenay - Caasimada Online
Home Warar Nin xabsiga Kobar ku jira oo madaxweynihii hore ee Suudaan ooyin ka...
Nin xabsiga Kobar ku jira oo madaxweynihii hore ee Suudaan ooyin ka keenay
Khartoum (Caasimadda Online) – Nin xabsiga Kobar kula jiro Madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar AL-Bashiir ayaa sabab u noqday inay illin kasoo daadato Al-Bashiir.
Sida uu qoray Wargeyska kasoo baxo Magaalada Khartuum ee dalka Suudaan ee lagu magacaabo Rakooba , Madaxweynihii hore ee Suudaan AL-Bashiir ayaa ooyin la dhacay kadib markii mid kamid ah Maxaabiista Xabsiga kula jirto uu ugu yeeray “Madaxwxeynihii la casilay”.
Wargeyska Rakooba ayaa arrintaan ka qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay “ War Gudaha xabsiga Kobar, Albashiir oo oyin la dhacay, markii uu maqlay qof ugu yeerayo Madaxweynihii la casilay”.
Wargeyska oo soo xigtay Ilo ku dhow Albashiir ayaa sheegay inuu ilmeeyey oo ay indhahiisa sidii daadka oo kale ilin ugu qubanaysay, kadib, markii uu maqlay hadalkaasi, waxaana uu rumeysan la’ yahay inuu ku xiran yahay Xabsiga Dhexe ee Kobar ee magaalladda Khartuum.
Albashiir oo xanuunka Isku-buuqa ama Istareeska ka qaaday Xabsiga uu ku jiro waxaa isbuucii hore daaweyn loo geyeey Isbitaalka Royal Care ee ku yaalla Khartuum, kadib, markii uu ku dhacay cuddurka Istarooga oo aad u kooban iyo isagoo diiday inuu cuntada cuno.
Hoggaanka Militariga ee la wareegay Maamulka Dalka Suudaan ayaa sheegay in Madaxweynihii hore ee dalkaas lagu booqan karo Xabsiga uu ku jiro isla markaasna ay xaaladiisa Caafimaad tahay mid aan 100% aheyn.